Ezaky ny fitondrana : NITSAHATRA NY TSY FANDRIAM-PAHALEMANA ANY AMBOASARY ATSIMO -
AccueilSosialyEzaky ny fitondrana : NITSAHATRA NY TSY FANDRIAM-PAHALEMANA ANY AMBOASARY ATSIMO
Ezaky ny fitondrana : NITSAHATRA NY TSY FANDRIAM-PAHALEMANA ANY AMBOASARY ATSIMO
11/01/2017 admintriatra Sosialy 0
Raha tsy nahita nangirana mihitsy ny faritra Anosy tamin’ny andron’ny Tetezamita vokatry ny asan-dahalo dia fantatra amin’izao fotoana izao fa nisy fivoarana izany nanomboka ny taona 2014. Hatramin’ny nandraisan’ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery ny fahefana mantsy, nitsahatra ny fandriam-pahalemana any an-toerana, indrindra ho an’ny distrikan’Amboasary Atsimo, araka ny fanambaran’ny lehiben’ny distrika any an-toerana, Razafindramaro Tanjaniaina Julio Pierrot. Izany rehetra izany dia noho ny ezaka nataon’ny fitondram-panjakana izay tarihin’ny Filoha Rajaonarimampianina hanafoana ny asan-dahalo, tamin’ny alalan’ny fametrahana ireo hetsika isankarazany. Tsy izay ihany fa teo koa ny fandraisan’andraikitra nataon’ny mpitandro ny filaminana izay nanao ny ainy tsy ho zavatra manafoana ireto fahavalon’ny firenena ireto. Fa tsy azo hadinoina ny famolavolana ny drafitra dahalo niova fo nataon’ny fitondrana, izay manampy betsaka ireo mpitandro filaminana hiady amin’ny dahalo.
Tao anatin’izay 3 taona nitondran’ny Filoham-pirenena izay mantsy, mandry amin’ny sofina roa ireo mponina any an-toerana ary tsy izay ihany fa afaka miompy omby ankalalahana, araka ny fanambaran’ny lehiben’ny distrikan’Amboasary Atsimo hatrany. Ankoatra ireo tanàna ambanivohitra dia fantatra fa mandry anaty fahalemana ihany koa Amboasary tanàna (Ville). Ary tsy any Amboasary ihany fa hatrany Betroka no nahitana izany filaminana izany araka ny loharanom-baovao. Izany no vokatry ny fametrahana ny toby Usad any an-toerana. Fa ny mbola indro kely, araka ny voalaza hatrany dia ny fanafihana ataon’ireo dahalo avy any amin’ny tanànan’Andrindra ny kaominina Amboasary Atsimo. Mangataka ny mba hijeren’ny fitondram-panjakana izany manokana ity lehiben’ny distrika ity.